एक स्क्रैपर उपकरण तपाईंले विचार गर्नुपर्छ - Semalt द्वारा व्याख्या
Google नक्सा स्क्रैपर एक अपेक्षाकृत नयाँ, हल्का, शक्तिशाली र बहुमुखी उपकरण हो।. यसले विभिन्न वेब पेजहरू र Google नक्साबाट डेटा निकाल्छ र CSV र JSON को रूपमा परिणाम प्राप्त गर्दछ. तपाईं यस व्यापक सेवाको साथ कुशलतापूर्वक व्यापार वेबसाइटहरू, फोन नम्बरहरू र इमेल ठेगानाहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ. यसको केही विशेषताहरू तल छलफल गरिन्छ.
1. धेरै ढाँचामा डेटा स्क्रैप गर्दछ:
Google नक्सा स्क्रैरको साथ, तपाई शहर, जिप कोडहरू, मूल्याङ्कन, भिजुरीहरू, लम्बाई, खुल्ला घण्टा, र व्यवसाय नाम सजिलै हटाउन सक्नुहुनेछ।. यो निकायले कच्चा डेटालाई संगठित रूपमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्दछ. यदि तपाईं डेटा म्यानुअल रूपमा संकलन र स्क्रैपिंग गर्ने थकित हुनुहुन्छ र पर्याप्त प्रोग्रामिंग क्षमताहरूको कमी छ भने, तपाईंले आफ्नो काम पूरा गर्न Google नक्सा स्क्रैपर प्रयास गर्नुपर्छ।.
2. दुई संस्करणहरूमा उपलब्ध छ:
अन्य साधारण स्क्रैपिंग सेवाहरूको विपरीत, Google नक्सा खरानीहरू दुई विशिष्ट संस्करणहरूमा उपलब्ध छ: मानक संस्करण र डेमो संस्करण. डेमो संस्करणले तपाईंलाई यो सफ्टवेयर कोसिस गर्न र 15 दिनसम्मका लागि यसको सेवाहरूको आनन्द लिने अनुमति दिन्छ. यसको मानक संस्करणले तपाईंलाई $ 99 खर्च गर्नेछ र असाधारण लाभ र सुविधाहरू अनलक गर्दछ.
3. प्रत्येक दिन हजारौं पृष्ठहरू:
Google नक्सा खरानीको सबैभन्दा विशेष विशेषताहरूमध्ये एउटा हो कि यो प्रति दिन 150,000 वेब पृष्ठहरूमा पुग्छ र तपाइँलाई यो सेवाको लागि केहि पनि खर्च छैन।. यो उपकरण प्रोग्रामर र गैर-प्रोग्रामर दुवैका लागि राम्रो छ र उनीहरूको सशुल्क संस्करण किन्नु भन्दा धेरै पृष्ठहरुबाट स्क्रैप डाटा लाई सजिलो बनाउँछ।.
4. एकाधिक ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ:
यो उन्नत वेब स्क्रैपर वा डेटा एक्सचोररले तपाईको जानकारी जेएसओएस, आरएसएस र सी एफ ढाँचामा भण्डार गर्दछ; तपाईं एक्सेल पानाहरूमा इच्छित डेटा खोल्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई आफ्नो Google Drive मा आयात गर्न सक्नुहुनेछ.
5. संगत र विश्वसनीय:
स्क्रैपिंग सफ्टवेयर र उपकरणहरू जसले धेरै ब्राउजरहरूलाई समर्थन गर्दैन।. आयातको विपरीत. io र किमोनो ल्याब्स, Google नक्सा स्क्रैर विन्डोज 7, माइक्रोसफ्ट एक्सपी, विन्डोज 8 र विन्डोज 10 सँग मिल्दो छ. यसको अतिरिक्त, यो गुगल क्रोम, फायरफक्स, र इन्टरनेट एक्सप्लोररसँग मिल्दो छ र एक विश्वसनीय सेवा हो.
6. परिणामहरू सही रूपमा देखाउँदछ:
यदि तपाईं स्क्रैप गरिएको बेला डेटाको गुणस्तर निरन्तरता र निरीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले Google नक्सा स्क्रैप गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।. यो सेवाले तपाईंलाई डेटा हेर्न र सबै साना त्रुटिहरू यसको द्वारा यसको समाधान गर्न दिन्छ. साथै, यो एकै समयमा विभिन्न खोज मापदण्डहरू र किवर्डहरू प्रविष्ट गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ.
7. सजिलै र सजिलै संग काम गर्दछ:
Google नक्सा स्क्रैर गर्न सजिलो छ र प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस छ. एकपटक तपाईंले कोटी चयन गर्नुभयो वा कीवर्ड र स्थान प्रविष्ट गर्नुभएपछि तपाईसँग केहि मिनेटको लागि खोजी सुरु गर्न र तपाईंको आउटपुटहरूको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।. Google नक्सा डाटा एक्सटेक्टरले सबै किसिम व्यवसायहरूको लागि उपयुक्त छ र तत्काल स्वच्छ र पढ्न योग्य सीभीभी फाइलहरू सिर्जना गर्दछ.
8. कुनै पनि समय निकाल्नुहोस्:
तपाईं यो स्मार्टफोन, ट्याब्लेटहरू वा कम्प्युटर प्रणालीमा यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको कार्यहरू कहीं पनि, कुनै पनि समयमा गर्न सक्नुहुनेछ।. तपाईं यसको नतिजा बारे चिन्ता गर्नुपर्दैन. यो उपकरणले तपाईले प्रयोग गरिरहनुभएको यन्त्रको प्रकार र फ्रीलान्सरहरू र व्यवसायी व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त नभएसम्म सटीक डेटा प्रदान गर्नेछ. तपाईं पनि यस सेवाको साथ पहेंलो पृष्ठहरू र सेतो पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ Source .